एमालेको उपनिर्वाचनमा खर्च कति ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 16:54
एमालेको उपनिर्वाचनमा खर्च कति ?
इनेप्लिज २०७२ वैशाख २४ गते ५:४९ मा प्रकाशित
बलेवा (बागलुङ), २४ वैशाख । गत चैत २८ गते जिल्लाको क्षेत्र नं १ मा सम्पन्न संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बागलुङको रु आठ लाख ४६ हजार पाँच खर्च भएको छ ।
उपनिर्वाचनमा दोस्रो स्थान पाएको एमाले निर्वाचन आयोगसमक्ष खर्च विवरण बुझाउने पहिलो दल बनेको छ । बुधबारसम्म एमालेले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी बाबुराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उपनिर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार चम्पादेवी खड्का विजेता हुनुभएको थियो । एमाले उम्मेदवार मनाकुमारी केसी दोस्रो बन्नुभएको थियो । निर्वाचनमा १० राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्रसहित १३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
संविधानसभाको निर्वाचन ऐन २०७० अनुसार चुनावी परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनले निर्वाचनमा बढीमा रु १० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपनिर्वाचनको परिणाम चैत २९ गते घोषणा गरिएको थियो ।
ऐनअनुसार आगामी जेठ ३ गतेसम्ममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले विवरण बुझाउनुपर्नेछ । उपनिर्वाचनमा काँग्रेस, एमाले, एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दल तथा स्वतन्त्रबाट तुलसी थापा, सरस्वती पन्त र नैनकुमारी केसी चुनावी मैदानमा थिए । चैत २८ गते विद्युतीय मतदान भएको थियो ।